Shiinaha Soft PVC Keychains warshad iyo soosaarayaasha | SJJ
Furayaasha furayaasha jilicsan ee PVC ayaa caan ka ah adduunka oo dhan. Isticmaalayaasha waa dad waaweyn iyo carruur. Badeecadaha waxaa lagu bixin karaa waqti gaaban oo leh tayo sare iyo qiima macquul ah dhammaan noocyada kala duwan ee dadku rabaan inay ku muujiyaan astaamahooda ama fikradaha iyaga oo adeegsanaya walxaha furayaasha yar yar.
Furayaasha furayaasha jilicsan ee PVC ayaa caan ka ah adduunka oo dhan. Isticmaalayaasha waa dad waaweyn iyo carruur. Badeecadaha waxaa lagu bixin karaa waqti gaaban oo leh tayo sare iyo qiima macquul ah dhammaan noocyada kala duwan ee dadku rabaan inay ku muujiyaan astaamahooda ama fikradaha iyaga oo adeegsanaya walxaha furayaasha yar yar. Waxaa loo adeegsan karaa dhammaan noocyada kala duwan ee dhacdooyinka, sumcadaha caanka ah, alaabada xayeysiinta, isboortiga, madadaalada, barashada iwm heerarka imtixaanka. Qaybta jilicsan ee PVC waxaa lagu samayn karaa dhammaan noocyada qaababka iyo cabbirrada iyadoo la eegayo codsiyada macmiilka. Dhammaan midabada Pantone waa la heli karaa, midabyo badan ayaa lagu gaari karaa shay isku mid ah, faahfaahintana waxaa lagu tusi karaa si waafaqsan naqshadahaaga. Dabeecadda Jilicsanaantu waxay ilaalin doontaa faahfaahinta waxayna iska ilaalin doontaa xoqan, iska ilaali inaad dhaawacdo jirka iyo waxyaabo kale.
Ujeedooyin: Ku dhinta 2D ama 3D dhinac ama laba dhinac
Midabada: Dhammaan midabada Pantone waa la heli karaa, midabyo badan oo ku jira shay isku mid ah
Ikhtiyaarrada Lifaaqa Guud: Giraanta boodka, Giraanta Furaha, isku xirka Birta, Xargaha, Silsiladaha Kubadda iwm.
Xiga: Daboolida Furaha PVC ee jilicsan
Alaab -qeybiyeyaasha Keychain -ga Mustang ee ugu Fiican Shiinaha
Warshadaha Keychain Keysan ee ugu Fiican Shiinaha
Shirkadaha Shiinaha ee Thanos Keychain Best
Xigashooyinka Keychains -ka ugu Fiican Shiinaha
China Metal Keychain iyo PVC Keychain qiimaha
Keychains Logo Custom
Furayaasha Furaha Khaaska ah